Webflow: Design, Prototype and Launch Dynamic, Web nrụọrụ na-anabata ozi ọma Martech Zone
Fkwanyere waya waya bụ ihe mgbe ochie? M na-amalite na-eche echiche dị ka ọhụụ ọhụrụ nke WYSIWYG enweghị koodu, ịdọrọ na dobe ndị editọ ugbu a na-akụ ahịa. Usoro njikwa ọdịnaya nke na-ewepụta otu echiche na njedebe na njedebe n'ihu nwere ike bụrụ ihe mgbe ochie. Ee… ma eleghị anya ọbụna WordPress ma ha na-amalite ịchụkwudo.
N'ime ndị na-emepụta 380,000 ejirila ihe karịrị 450,000 saịtị Webflow. Ọ bụ ngwa ọrụ ntanetị, sistemụ njikwa ọdịnaya, yana ikpo okwu Bochum niile n'otu. Nke a pụtara na ndị na-emepụta ihe na-emepe koodu ahụ n'otu oge - a na-ewepụtakwa nsonaazụ na-akpaghị aka maka nhazi nhazi.
Atụmatụ Webflow gụnyere:
Onye na-enweghị atụ - Webflow na - ede ederede dị ọcha, ederede maka gị ka ị nwee ike ilekwasị anya na nhazi ahụ. Malite na kwaaji oghere maka njikwa okike zuru ezu, ma ọ bụ bulie ndebiri iji bido ngwa ngwa. Site na atụmatụ ha kachasị elu, ị nwere ike ibupu HTML na CSS gị n'ụzọ dị mfe iji masịrị gị.
Nwepụta na-eme mgbanwe - Mepụta ngwa ngwa omenala na-achọ desktọọpụ, mbadamba, na mobile (odida obodo na Eserese). Ọ bụla imewe mgbanwe ị na-eme cascades ka obere ngwaọrụ na-akpaghị aka. Were nchịkwa ọ bụla, yabụ na saịtị gị na-adị ka pixel-zuru oke na ngwaọrụ niile.
Anim na mmekọrịta - Weta na pịa, na hover, na ibu mmekọrịta na ndụ na-enweghị koodu nwere ihe nkiri nke ga-arụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ ọ bụla na gafee ọ bụla ihe nchọgharị ọgbara ọhụrụ.
Ihe arụburu - Ntugharị, sliders, taabụ, ụdị na igbe ọkụ bụ ndị e wuru tupu oge ahụ, zaghachi nke ọma ma tinye ya na ikike ijide ụzọ na nzaghachi site na igbe ahụ.
Ecommerce na Njikọ ọnụ - Ntinye aka emeputara gụnyere Zapier na Mailchimp. Mee ụlọ ahịa gị ma jikwaa ụgbọ ibu azụmahịa na ịkwụ ụgwọ site na iji ngwa ndị ọzọ dịka Shopify.
Templates - Họrọ si n’elu 100 azụmaahịa, pọtụfoliyo, na ndebiri blog na ị nwere ike hazie n'ime Webflow.
Bochum na Ndabere - Jiri ngalaba ahaziri iche na nkwado ndabere na mpaghara akpaaka na ntuziaka, nlekota nche, nyocha na ebe nchekwa data na nnabata ngwa ngwa.
Nkuzi - Webflow si enyemaka n’etiti na-enye ọtụtụ nkuzi iji bido ma na nkuzi miri emi iji nyere gị aka, tinyere ọgbakọ na ebe obibi.
Banye maka Free Webflow Akaụntụ
Tags: CMSngwaahịa ecommerceprototypeanabatanhazi mmeghachi omumeanabata prototypeanabata prototypingụlọ ahịantanetị